WARBIXIN: Tobankii Xidig Ee Ugu Fiicnaa, Xogtii & Rekoodhadii Laga Diwaan Galiyay Kulamadii Todobaad Ee Premier Leaque, Xaaladaha Ay Kooxaha Waa Wayn Ku Soo Qaadan Doonaan Fasaxa Kulamada Caalamiga Ah Iyo Faaqidaada Kulamadii PL. – WWW.Gool24.net
WARBIXIN: Tobankii Xidig Ee Ugu Fiicnaa, Xogtii & Rekoodhadii Laga Diwaan Galiyay Kulamadii Todobaad Ee Premier Leaque, Xaaladaha Ay Kooxaha Waa Wayn Ku Soo Qaadan Doonaan Fasaxa Kulamada Caalamiga Ah Iyo Faaqidaada Kulamadii PL.
Waxaa la soo ciyaaray kulamadii todobaad ee horyaalka Premier Leaque waxaana muddo laba usbuuc ah loo firaaqeeyay kulamada isreeb reebka koobka aduunka loogu soo baxayo iyada oo xulalka qaramada aduunku ay dagaal ugu jiraan in ay u soo baxaan koobka aduunka ee Russia 2018. Tababarayaasha kooxaha ayaa haddaba ka walwalsan in ay ciyaartoydooda muhiimka ah dhaawacyo ku soo gaadhaan tababarka ama kulamada xulalka qaramadooda iyada oo ay haddaba jiraan ciyaartoy dib loo soo celiyay.
Laakiin muddada lagu jiro kulamada caalamiga ah waxay kooxaha Premier leaque ku jiraan xaalado kala duwan oo la xidhiidha natiijooyinkii ay soo heleen kulamadii todobaad ee usbuucan la soo ciyaaray iyada oo kooxaha qaar ay farxad ku sugi doonaan kulamada badhtamaha bishan la ciyaari doono halka qaar kale ay murugo iyo waqti dheer ku noqon doonto.
Ilaa hadda ma jiro wax iska badalay hogaanka Premier Leaque waxaana si adag ugu dhegan kooxda Pep Guardiola ee Manchester City oo ka soo gudubtay mid ka mid ah imtixaankii ugu adkaa ee ay xili ciyaareedkan soo martay. Man City ayaa Stamford Bridge guul kaga soo gaadhay Chelsea waxayna guushaasi ka caawisay in kooxda Guardiola ay wali hogaanka Premier Leaque sii hayso.
Manchester United oo waqti kooban si ku meel gaadh ah u sii haysay hogaanka Premier Leaque ayaa guul wayn Old traffrod kaga gaadhay kooxda taariikhdii abid ugu xumayd ka dhigaysa Premeir leeque ee Crystal Palacce, waxayna Red Devils dhibco la wadaagtaa dariskeeda Man City balse waxaa labada kooxood ay ku kala sareeyaan farqiga goolasha.
Labada Manchester waxay waqtiga kulamada caalamiga ah u tahay waqti farxadeed laakiin Chelsea iyo Antonio Conte waxay u tahay waqti murugo badan oo ayna heli doonin koox ay ku cadho baxaan si ay uga soo kabsadaan guuldaradii Man City.
Laakiin sidoo kale Liverpool ayaa muddadii laba xili kulan caalami u dhexaysay ku soo qaadatay xaalad dhibaato badan waxayna barbaro niyad jab ah la soo gashay Newcastle United iyada oo Klopp uu ilaa hadda garan laayahay waxa kooxdiisa iska badalay tan iyo guushii 4-0 ahayd ee ay Arsenal ka gaadheen intii aan loo bixin kulamadii hore ee caalamiga ahaa.
Dhinaca kale Arsenal ayaa ku raaxaysanaysa qaab ciyaareed fiican oo ka duwan qaabkii ay kulamadii hore ee caalamiga ahaa ku soo qaadatay, waxayna kooxda Arsene Wenger u muuqataa mid hadda dib u heshay dariiqii saxda ahaa ee ka lunsanaa ka hor kulamadii hore ee caalamiga ahaa. Arsenal ayaa kooxda Brighton saddexda dhibcood ka tirsatay si ay markan xaalada fiican ugu soo qaadato fasaxa kulamada caalamiga ah.
Haddaba halkan kaga bogo waxyaabihii ugu muhiimsanaa iyo rekoodhadii laga diwaan galiyay kulamadii ay kooxaha waa wayni soo ciyaareen todobaadkan:
1-Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge xili ciyaareedkan 2017/18 ku lumisay 8 dhibcood oo horyaalka Premier leaque ah kadib marii ay afar kulan oo kaliya ku soo ciyaartay, waxaana cajiib ah in guud ahaan xili ciyaareedkii hore ee 2016/16 ay garoonkeeda ku soo lumisay 6 dhibcood oo kaliya taas oo la mid ah in dhibcaha ay Chelsea garoonkeeda ku lumisay afar kulan ay 2 dhibcood ka badan yihiin 6 dhibcood ee ay guud ahaan xili ciyaareedkii hore Stamford Bridge ku lumisay.
2-Manchester City ayaa awooday in ay lix kukan kulan oo xidhiidh ah oo horyaalka Premier Leaque ka tirsan ay shabaq nadiif ah garoonka kala baxday waxaana afartan kulan ka mid ah kulamadii Chelsea iyo Liverpool ay la ciyaartay waana markii ugu horaysay ee ay City rekoodhkan oo kale gaadhay tan iyo September 2015 markaas oo ay lix kulan kulan oo xidhiidh ah shabaqa ilaashatay.
3-Chelsea ayaa markii ugu horaysay laba kulan oo xidhiidh ah oo ay Stamford Bridge ku ciyaartay horyaalka premier Leaque ku fashilantay in ay wax goolal ah dhaliso waxaana ugu danbaysay November 2012 iyada oo kooxda Conte kulamadii Arsenal iyo Man City wax goolal ah dhalin wayday.
4-Pep Guardiola ayaa ku raaxaysatay guushiisii abid ugu horaysay ee uu Chelsea waqtiga rasmiga ah ee ciyaarta kaga gaadhay waxayna ku qaadatay siddeed kulan isaga oo hore ugala soo kulmay Blues 3 guuldaro iyo 4 barbaro ah laakiin markii uu Bayern Munich joogay waxa uu Chelsea koobka UEFA Super Cup kaga qaaday rekoodhayaal.
5-Kevin De Bruyne oo goolkii guusha u dhaliyay Man City ayaa sagaal gool oo ka mid ah 11 kii gool ee ugu danbeeyay Man City waxa uu ka dhaliyay meel ka baxsan xerada ganaaxa waxaana ka mid ah afartiisii gool ee ugu danbeeyay.
Manchester United 4-0 Crystal Palace:
1-Romelu Lukaku ayaa barbareeyay rekoodhkii Andrew Cole ee Manchester United isaga oo xidiga ree Belgium 7 kulan oo Premier Leaque ah ka dhaliyay 7 gool waxaana rekoodhkan haystay Adrew Cole kaas oo isna Manchester United todobadiisii kulan ee horyaalka Ingiriiska ugu horeeyay 7 gool ka soo dhaliyay.
2-Marouane Fellaini ayaa xili ciyaareedkan 2017/18 waxa uu saddex gool ku soo dhaliyay afar bartilmaameed oo kulamada Premier leaque ah waana tiro ka badan isku darka labadii xili ciyaareed ee uu ka horeeyay intii uu goolal ku soo dhaliyay isaga oo 46 darbo oo uu tuuray ku soo dhaliyay kaliya 2 gool!!.
3-Crystal Palace ayaa todoba kulan oo Premier leaque ah aan hal dhibic iyo hal gool ka soo helin waxaana afarta horyaal ee England ugu sareeya ka rekoodh liidata oo kaliya kooxda Halifax Town taas oo xili ciyaareedkii 1990/91 kii aan 730 daqiiqo wax gool ah dhalin halka Crystal Palace ay hadda ku jirto kaalinta labaad ee abid ugu xun iyada oo 630 daqiiqo aan wax gool ah ka dhalin Premier Leaque.
4-Dhinaca kale Crystal palace ayaa siddeed kulan oo xidhiidh ah oo Premier Leaque ah soo guuldaraysatay waana taariikh xun oo ay wadaagaan kooxda Hartlepool oo sidan oo kale ay ku dhacday 1970 iyo 1993 si la mdi ah Sunderland oo iyaduna rekoodhkan xun dhigtay 1977 kii.
5-Marcus Rashford ayaa tobankii kulan ee Manchester United ugu danbeeyay ee tartamada oo dhan ku soo lug lahaa 9 gool waana shan gool oo uu soo dhaliyay iyo afar gool caawineed oo uu soo sameeyay.
6-Manchester United ayaa kulankiisii shanaad oo xidhiidh ah oo ka tirsan Premier leaque waxay shabaq nadiif ah kala baxday Old traffrod waana markii ugu horaysay ee ay rekoodhkan oo kale gaadhay tan iyo March 2010 kii markaas oo ay kooxdii Sir Alex Ferguson 7 kulan oo oo xidhiidh ah ay shabaq nadiif ah kala baxday Old Traffrod.
Arsenal 2-0 Brighton:
1-Tababare Arsene Wenger ayaa rekoodh cusub u dhigay tababarayaasha horyaalka Premier leaque ee hadda ama hore uga soo shaqeeyay, wuxuuna noqday tababarihii ugu horeeyay ee 45 kooxood oo kala duwan guulo kaga gaadhay horyaalka Premier leaque wuxuuna dhaafay Sir Alex Ferguson oo 44 kooxood oo kala duwan guulo kaga gaadhay PL.
2-Alexis Sanchez ayaa tan iyo bilawgii xili ciyaareedkii hore waxa uu ku soo lug lahaa 35 gool oo Premier leaque ah waana 24 gool oo uu soo dhaliiyay iyo 11 gool caawineed oo uu sameeyay waana tiro laba jibaar ka badan ciyaartoy kasta oo Arsenal ahi goolasha uu ku soo lug lahaa min bilawgii xili ciyaareedkii hore.
3-Nacho Monreal ayaa goolkii sugayay goolkii uu Arsenal uga dhaliyay kulankii Brighton muddo 1660 maalmood ah isaga oo goolkiisii ugu danbeeyay ee Arsenal dhaliyay March 16,2013 kii markaas oo uu shabaqa ka soo taabtay kooxda Swansea City.
4-Arsenal ayaan koox heerka labaad ka soo baxday wax guuldaro ah Emirates Stadium kagala kulmin tan iyo November 2010 kii markaas oo ay kooxda Newcastle United guuldaro kala kulantay iyada oo heerka labaad ka soo baxday.
Newcastle United 1-1 Liverpool:
1-Tan iyo markii uu Rafa Benitez la wareegay shaqada Newcastle United ayay hal guudaro oo kaliya ku soo gaadhay garoonkeeda St James’ Park ee kulamada Premier leaque waxayna Newcastle muddadan soo heshay 5 guulood iyo 3 barbaro ah oo uu kulankii Liverpool ugu danbeeyay.
2-Philippe Coutinho ayaa goolkiisii 17 aad oo Premier Leaque ah ka dhaliyay meel ka baxsan xerada ganaaxa waana tiro goolal ah oo ka badan 3 gool inta uu ciyaartoy kasta oo horyaalka Premier Leaque ka ciyaaraa uu meel ka baxsan xerada ganaaxa uu goolal kaga dhaliyay tan iyo markii uu Coutinho sanadkii 2013 kii ku soo biiray Liverpool.
3-Liverpool iyo Newcastle United ayaan waligood barbaro gool la’aan ah ku kala baxin waxayna soo wada ciyaareen 44 kulan oo Premier Leaque ah oo aanu midna gool la’aan ku dhamaan waxaana ka horeeya oo kaliya kulanka Necastle United vs Tottenham oo ay 45 kulan oo Premier Leaque ah goolal iska soo dhaliyeen.
Waa Kuwee Tobankii Ciyaartoy Ee Usbuucan Ugu Fiicnaa Premier Leaque Ee Ku Soo Guulaystay Xidigihii Garoomada Ugu Fiicnaa?
Chelsea 0-1 Manchester City- Kevin De Bruyne
Mancheser United 4- Crystal Palace-Marouane Fellaini
Arsenal 2-0 Brighton –Alexis Sanchez
Newcastle United 1-1 Liverpool –Matt Ritchie
Huddersfield 0-4 Tottenham-Harry Kane
Bournemouth 0-0 Leicester City-March Pugh
Stoke 2-1 Southampton-Kurt Zouma
West Brom 2-2 Watford- Richarlison
West Ham 1-0 Swansea-Alfie Mawson
Everton 0-1 Burnley-James Tarkowski
Kadib Kulamada Caalamiga Ah Marka Laga Soo Laabto Kulamadee Ayay Kooxaha Waa Wayni Ciyaari Doonaan?
Marka laga soo laabto kulamada caalamiga ah Manchester United aya gali doonta afar kulan oo xidhiidh ah oo ay marti noqon doonto waxay ugu horayn booqan doontaa Liverpool waxaana u raaci doona kulanka Champions Leaque ee ay Benfica u safri doonto halka marka ay soo laabto ay haddana marti u noqon doonto Huddersfield oo kulan Premier leaque ah halka ay markale kulan marti ah ugu bixin Swansea City oo ay Leaque Cupka la ciyaari doonto.
Dhinaca kale marka kulamada caalamiga ah laga soo laabto Chelsea ayaa safar gaaban u gali doonta kooxda ay London ka wada dhisan yihiin ee Crystal Palace waana kulan la filayo in Blues ay cadho babax wayn ka dhigan doonto waxaana la ciyaari doonaa sabtida October 14.
Manchester City ayaa isla sabtida October 14 waxay Etihad Stadium ku soo dhawayn doontaa kooxda Stoke City waana kulan la filayo in kooxda Guardiola ay guulaha sii wadan karto isla markaana ay hogaanka Premier leaque sii xejisan karto.
Arsenal ayaa iyaduna kadib kulamada caalamiga ah waxay booqan doontaa kooxda xili ciyaareedkan qaab ciyaareedka fiican soo bandhigaysa ee Watfrod waxaana kulankan la ciyaari doonaa isla sabtida October 14.
Liverpool ayaa sabtida October 14 waxay Anfield ku soo dhawayn doontaa kooxda ay colaada wayni ka dhexayso ee Manchester United, waana kulan uu Klopp u adeegsan karo in uu ku xaliyo dhibaatada kooxdiisa soo haysatay halka Mourinho uu rekoodh fiican ku haysato Anfield.
Halkan kaga bogo Miiska Kala Saraynta Premier leaque ee Kadib Kulamadii Todobaad Ee La Soo Ciyaaray:
Guntii iyo gabagabadii, kooxaha ree Manchester ayaa wali ah kooxaha awooda ugu saraysa ku leh horyaalka Premier Leaque, waxayna wali muujinayaan in ay yihiin kooxaha xili hore loo saadaalinayo in ay koobkan ku guulaysan karaan.
Manchester City ayaa ah kooxda usbuucan cadaysay in ay si dhab ah ugu tartamayso koobka Premier Leaque isla markaana ay adkaan doonto sida Guardiola koobka looga qaadi karaa laakiin Man United ayaa wali u baahan in ay kulamada waa wayn ee soo socda ay taas iyaduna ku cadayso.
Liverpool waxay haddaba u muuqataa mid dagaalka ugu wayn u gali doonta afarta kaalmood ee sarre inkasta oo ay wali xili hore tahay balse astaamaha xiliga hore ah ayaa muujinaya in kooxda Klopp ayna lahayn awoodii ay koobka ugu guulaysan lahayd. Waxaana jira khabiiro sheegay in ku guulaysiga Liverpool ee koobka Premier Leaque ay ka dhawdahay in Crystal Palace ay baaqi ku sii ahaan karto PL!!.
Arsenal waxay samaysay woxogaa soo kabsasho ah laakiin waxay soo guulaysatay kulamo markii horeba laga filayay in ay soo guulaysan karto inkasta oo ay kulankii Chelsea awooday in barbaro ay soo galaan, laakiin rajada Gunners ayaa iyaduna wali u muuqata mid afarta kaalmood ee sarre u dagaalamaysa.
Xaalada Chelsea ayaa xili ciyaareedkan ah mid aan la saadaalin karin waxay mararka qaar u muuqataa koox koobka difaacan karta laakiin kulamada qaar waxaa soo baxaysa dhaliil wayn. Laakiin guuldaradii ka soo gaadhay Manchester City waxaa sabab wayn ka ahayd daalkii guushii ay Ateltico Madrid ka soo gaadheen iyada oo City talaadadii isla garoonkeeda ku sii ciyaartay halka Blues oo ay Spain u safartay iyada oo waliba arbacdii ciyaartay.
Laakiin taasi ma aha mid Antonio Conte iyo kooxdiisa cudur daar unoqonaysa waana mid la sii ogaa in ay saamayn xili ciyaareedkan ku yeelanayso maadaama oo uu xili ciyaareedkii hore ku mashquulay kaliya horyaalka Premier leaque. Si kastaba ha ahaatee, kulamada siddeed ee Premier Leaque iyo xaalada ay kooxaha waa wayni la soo laabtaan ayaa la ogaan doonaa.